Amathiphu wokusebenzisa ibhethri elincane ku-Android | Izindaba zamagajethi
Amasu okusindisa ibhethri ku-Android
Njengamanje abantu abaningi banedivayisi yeselula ye-Android, isidingo sokwenza ukuthi amandla webhethri ahlala isikhashana kungenye yezinjongo ezinkulu ezizama ukutholwa ngabasebenzisi bayo. Sinezindaba ezinhle nezimbi maqondana nalokhu, ngoba kule ndatshana sizokhuluma ngamaqhinga ambalwa ukuzama ukwenza ukushaja kwebhethri lethu kuhlale isikhashana.
Into yokuqala esizoyicacisa ukuthi alukho uhlobo lwesicelo olungangeza noma lwengeze isikhathi sokusetshenziswa kwebhethri kuselula ye-Android; kuthiwani uma ekhona kungamathuluzi athile angasisiza ukuphatha amandla inikezwe ibhethri lalemishini. Kule ndatshana sizokhuluma, okuyizinhlelo zokusebenza ze-Android ezingadla kakhulu ibhethri lakho, okuthile okuhlaziyiwe kwafundwa yizinombolo eziningi zochwepheshe abasebenzise amamitha athile ngale njongo.
1 Izinhlelo zokusebenza zokuphatha amandla webhethri ku-Android
2 Izinhlelo zokusebenza ze-Android ezisebenzisa amandla amaningi ebhetri
3 Amathiphu awusizo wokonga impilo yebhethri ku-Android
Izinhlelo zokusebenza zokuphatha amandla webhethri ku-Android
Phambilini singathanda ukukusho lokho ngenkathi ama-milliamps amaningi ibhethri lethu lingaletha ekucacisweni kwakho, ngokomqondo singaba nesikhathi esengeziwe sokuzimela kudivayisi yethu ye-Android. Ngemuva kokwenza lokhu kucaciswa okuncane, njengethuluzi lokuqala lale nhloso esingalisho Isilondolozi Sebhethri Esilula, eza ukunikeza umsebenzisi amaphrofayli amaningana ongakhetha kuwo; ngamunye wabo uzokwenza kungasebenzi imisebenzi ethile ngenhloso eyodwa yokuthi amandla webhethri awasetshenziswa ngokushesha. Ukunikeza nje isibonelo esincane samanye amaphrofayili, singasho ukuthi umzuzu ofanayo lapho ibhethri liphelelwa ngamandla, ithuluzi lizokwenza kungasebenzi ukuxhumana ne-GPS kuze kube yilapho inkokhiso ibuyela phezulu.
Nathi sinawo Ukuxhumana Okuhlakaniphile, okuthi esikhundleni salokho ilinde ukuthi ibhethri lifinyelele okungenani, kepha izame ukubona ukusetshenziswa kwayo ngokungadingekile. Isibonelo, uma ngesikhathi esithile isikrini sedivayisi yethu ye-Android sicishiwe isikhathi eside, ukuxhumeka kwe-Wi-Fi kuzokwenziwa kungasebenzi ngokuzenzakalela ukugwema ngokunembile lokhu kusetshenziswa.
Lapho isikrini sivuleka futhi, ukuxhumana kuzophinda kwenziwe kusebenze. Ngaphakathi kokumiswa, umsebenzisi angahlela lesi sici, akwazi ukuchaza ukuthi njalo ngehora lapho idivayisi ivimbela i-Wi-Fi isikhathi esithile.
Udokotela webhethri Elinye ithuluzi elihle kakhulu lokukwazi ukuphatha ukushaja kwebhethri kudivayisi ye-Android; ibeka isimo somthwalo endaweni yokwazisa, incoma ngesikhathi esithile, okuyimisebenzi okufanele ikhutshazwe ukuze amandla angadli ngokushesha.
Izinhlelo zokusebenza ze-Android ezisebenzisa amandla amaningi ebhetri
Akuyona imfihlo ukuthi kunezinhlelo zokusebenza eziningi ze-Android ezingadla amandla akho ebhethri ngendlela emangalisayo; ngaphandle kokuthi sisho ezinye zazo ngokuphelele, singakuphawula kancane lokho noma yiluphi uhlelo lokusebenza eligcina ifoni isebenza, ukuphoqa ngokuphelele ukusebenzisa ibhethri lakho.
Ngokuya ngalo mbandela, imidlalo yevidiyo kanye namanethiwekhi okuxhumana nabantu yilawo angahle adle ngokweqile ukushaja kwebhethri, ngoba abasebenzisi bawo bahlala bexhumeke cishe bengaphazanyiswa kulezi zindawo. Ngaphandle kwalokhu, amagama wevidiyo ayinkimbinkimbi futhi anamandla adinga inani elikhulu lezinsizakusebenza ukuze zisebenze; Uma sixoxa noma sisebenzisana nezithombe kumanethiwekhi omphakathi, lokhu futhi kumelela umzamo omkhulu wedivayisi ngakho-ke, ngokushaja noma amandla ebhethri kudivayisi yethu yeselula ye-Android.
Amathiphu awusizo wokonga impilo yebhethri ku-Android
Ukugqama nokuvala isikrini. Kuyadingeka ukuthi ungafaka ukumiswa kohlelo lwakho lokusebenza lwe-Android ukuphatha kahle lezi zici ezi-2. Ukukhanya kungancishiswa kufinyelele ezingeni lapho yonke into ifundeka khona; ukuvala isikrini ngokuvamile kusethelwe kumasekhondi angama-30, into ongayigcina noma uyinyuse ngokuya ngesidingo sakho somsebenzi kudivayisi. Uma ukwandisa le parameter, usenenkinobho yokuvala ngesandla isikrini sekhompyutha.
Vala imisebenzi ku-Android. Uma ungazukungena kwi-Intanethi, kunconywa ukuthi ukhubaze ukuxhumana kwe-Wi-Fi; Ungathola futhi ukubuyekeza indawo yezicelo, lapho kunconywa khona phoqa ukuvalwa kwalabo ongabasebenzisi. Lokhu akusho ukuthi zizokhishwa kepha kunalokho ukuthi ngeke zisebenze ngakho-ke ngeke zinikeze umsebenzi owengeziwe kudivayisi yakho ye-Android nomthwalo wayo.
Vala idivayisi ye-Android. Uma uhamba esitimeleni, kunconywa ukuthi ucime isikrini sedivayisi yakho ephathekayo; Kufanele wenze isimo esifanayo ebusuku, ikakhulukazi uma unqume ukuphumula. Kunenani elikhulu labasebenzisi abavame ukushiya isikrini ukuze banake yonke imilayezo noma izaziso ezifika phakathi kwamabili, into esingayinaka ngoba ukuphumula kufanele kube ngcwele.
Shaja idivayisi yethu ye-Android. Kulesi sici kunezingxoxo eziningi, ngoba abantu abaningi bathambekele ekuxhumaneni ekugcineni ne-adaptha yamandla efanele. Lokhu akulungile, njengoba ukushaja kwebhethri kuguga. Ngakho-ke, kuphela lapho sibona ukuthi inkomba yokushaja iphansi kakhulu, lapho kuzoba isikhathi esifanele lapho kufanele siyixhume esitolo sethu sikagesi ukuze ibhethri iqale.
Sikunikeze amathiphu ambalwa kule ndatshana, okuzoba wusizo kuwe uma kuziwa yenza ukushaja kwebhethri kuphethwe kahle futhi, ukuthi sisebenzisa izinsizakusebenza ezidingeka kuphela lapho sisebenza nedivayisi yethu ye-Android.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Amasu okusindisa ibhethri ku-Android
Uyazi ukuthi yiziphi ezinye izindlela okufanele zisetshenziswe esikhundleni se-Winamp?
Amaklayenti amahle kakhulu wemilayezo esheshayo ye-Windows